Cucumbers "Masha f1": nkọwa na ịkọ agrotechnology - Parthenocarpic kukumba iche - 2020
N'etiti ụdị kukumba dịgasị iche na ọtụtụ, ndị Dutch, otu mkpụrụ osisi kukumba dị mkpirikpi na aha na-adọrọ mmasị bụ "Masha f1" na-ebute ụzọ kachasị mma.
Nkọwa nke ohia
Nkọwa nke nwa ebu n'afọ
Ọrịa na nkwụsị nke pesti
Ịgha mkpụrụ na ala oghe
Mkpa maka akuku ihe onwunwe
Nhọrọ na nkwadebe nke saịtị ahụ
Ezi na ndị ọjọọ
Atụmatụ kacha mma
Ịgbara, weeding na loosening ala
Iji mụtakwuo ihe gbasara cucumbers "Masha f1" dị iche iche nke mba ọzọ ma ghọtakwuo ihe niile gbasara ya, ị ga-ezo aka na nkọwa ya. Azụpụtara ụdị a na Holland, na ụlọ ọrụ Seminis na-aga nke ọma. Ndị na-azụlite Dutch nwere ihe ịga nke ọma na-akwado ọrụ ha ma nye ndị na-eto eto na ndị na-elekọta ihe ubi nile ohere iji na-eto eto dị iche iche nke ọma nke nwere ike iguzogide njem ogologo oge ma nọgide na-egosi ya ogologo oge.
Ị ma? Ụmụ mmadụ anọ na-eri kukumba maka ihe karịrị afọ 4500 kemgbe oge Mesopotamian mepere anya.
Ihe dị iche iche "Masha f1" kukumba, ikpe site nyochaa, nwere njirimara magburu onwe ya na ụfọdụ uru dị iche iche karịa ụdị ndị ọzọ nke ọgbọ mbụ, nke a nwere ike ịghọta ya n'ụzọ dị mfe site n'izo aka na nkọwa ya na usoro agrotechnique.
Osisi nke kukumba na-eto eto na-etowanye ike, ma ọ bụrụ na ị na-enye ha nlekọta kwesịrị ekwesị, ị nwere ike nweta ihe karịrị mkpụrụ ise si n'otu alaka.
Mkpụrụ nke osisi na-enwe nke 8-10 cm na uka nke 90-100 g nwere cylindrical, nnukwu-knobby udi na-enwe obi ụtọ na anya na ọgaranya gbara ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na unobtrusive ìhè n'ọnyá na ìhè spotting. Akpụ akpụkpọ anụ, na pulp enweghi obi ilu.
Lelee kwa cucumbers dị iche iche, dị ka "Nezhinsky", "Onye ọkaibe", "Zozulya", "Obi ike".
Na-eweta ezigbo owuwe ihe ubi "Masha f1" na-amalite n'isi ụtụtụ, naanị maka ụbọchị 35-45 mgbe mbembụ mbụ ahụ gasịrị, ị nwere ike ịmịrịrị akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ ọhụrụ. Na mita mita anọ, ọ ga-esi ike ịnakọta site na 15 n'arọ mkpụrụ osisi, ọ bụrụhaala na ha toro na griin haus, osisi ndị a na-adịghị edozi na-emepụta obere ihe - 10-12 n'arọ.
Nakwa, ụdị dịgasị iche iche a ma ama maka ogo dị elu nke iguzogide ọrịa ndị na-ekesa ihe ubi dịka cladosporiosis, powdery mildew na nje cucumber, ma ọrịa ndị ọzọ na-emekarị ka osisi a ghara ịga. Ma maka igbochi ọ gaghị adị oke oke ịmepụta ọgwụ ntanetị pụrụ iche.
Kukumba "Masha" bara uru maka oriri ọ bụghị naanị ọhụrụ, kamakwa n'ụdị salted na pickled. A na-etinye ya n'ọrụ n'inwe nchekwa, na-enweghị ihe ọ na-agbanwe, na mkpụrụ osisi ahụ na-adị jụụ na n'enweghi ntụpọ.
Ị ma? Ndị Aboriginal bi n'àgwàetiti dị na Pacific Ocean store cucumbers na ụzọ dị mma. - ha na-etinye ha na banana banana wee lie ha n'ala iji chekwaa mkpụrụ osisi ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọkụkụ ma ọ bụ oké ifufe.
Iji na-eto eto dị elu na Masha cucumbers na mpaghara nke gị, ị ga-ebu ụzọ tụlee ụzọ aghụghọ niile na usoro ndị metụtara ịgha mkpụrụ na ịhọrọ mkpụrụ.
Ụlọ ọrụ Dutch "Seminis" nyere ndị na-ere ya ohere ka ha ghara itinye aka na nhazi ndị metụtara nkwadebe nke ihe ubi. Ndị na-emepụta juru ihe ha kụrụ n'ubi ha, na-ahọrọ ya ma hazie ya.
Ọ dị mkpa! Kukumba osisi ekwesịghị tinye tupu akuku.
Ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ ebe ma dozie ala maka ịkụ "Masha", ebe ọ bụ na ụdị dịgasị iche iche dị nnọọ njọ ma chọọ ọnọdụ ụfọdụ, ya bụ:
Ngbata ahụ kwesịrị ịbụ anwụ na-acha ma na-ekpo ọkụ.
Ala maka akuku kwesịrị ịbụ ìhè, na ọkwa dị ala nke acidity na, ọkacha mma, bara ọgaranya na humus.
Ebe ọ bụ na mgbụsị akwụkwọ, ọ dị mkpa iji weta nri n'ime ala ma ọ bụ ifatụ ya na mmiri na-emegharị, tupu ị kụrụ cucumbers.
Ezi ndị na-aga n'ihu maka ụdị dị iche iche ga-abụ nduku, tomato, mkpo nri, nri ndụ ndụ, kabeeji na eyịm.
Ọ dị mkpa! "Masha" enweghị ike kụrụ na ebe mmiri mmiri dị nso n'elu.
Ma ekwela ka mmiri na-acha odo odo na mmiri becchini na beets, bụ nke a na-ebute site na ala ihe niile dị mkpa kukumba.
Oge kacha mma maka ịkụ mkpụrụ osisi cucumber bụ ọkụ na ihu igwe (mbubreyo May - mmalite June). Ala kwesịrị ikpo ọkụ dị ka o kwere mee, n'ihi na ịgha mkpụrụ n'ala oyi na-ada mbà site n'adịghị ike, na-egbutu mkpụ osisi ma na-agbazi ya.
Atụmatụ ịgha mkpụrụ na-adabere na ọnọdụ nke Ome na stalks, ma kewara ya na 2: ikirikiri na vetikal. Okpokoro anya pụtara ịkụ na mita nke abụọ - 3 bushes, na osisi 4 cucumber 4 ma ọ bụ 5 ga-ekwe omume maka nhazi.
Ọ dabara na, cucumba Masha f1 adịghị achọ ka a na-asọpụrụ ya, mana iwu ụfọdụ ga-agbaso.
Ọgwụgwọ mmiri maka cucumbers dị mma iji ndokwa n'oge ụtụtụ ma ọ bụ n'oge mgbede, mgbe anyanwụ ka na-ekpo ọkụ ma mmiri nwere ike iru usoro mgbọrọgwụ. Ọ bụ n'ihi na ụdị dịgasị iche iche a na-agbanye mmiri na-atụ aro, maka Masha ọ dị mma na nso nso. Ọ bụrụ na ị na-agbaso usoro mmiri ahụ, ọ ga-eme ka ala dị ọcha mgbe ụbọchị 1-2 gachara, ọ ga-emekwa n'ụba.
Ọ dị mkpa! Maka ịkụ mkpụrụ osisi cucumber, ọ dị mkpa iji anyanwụ mee ka mmiri dị ọkụ; mmiri mmiri oyi nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ ndị na-amị mkpụrụ ghara ime ka ọ daa mbà.
Ọ dị ezigbo mkpa ịghara ichefu ihe ndị dị otú ahụ dị ka weeding na loosening. Mwepụ oge na-adịghị ize ndụ nke ahịhịa ga-enye cucumbers na-edozi ahụ. Ịgbachi anya ekwesịghị ịdị miri nke ukwuu ka usoro ahụ ghara imerụ ahụ ma ghara imerụ usoro mgbọrọgwụ.
Otu ihe dị mkpa n'usoro nke na-eto eto bụ ịmepụta kukumba ohia. A na-enweta ezi ihe site na pinching Ome, aji na ovaries, a na-eziga ha n'ụzọ ziri ezi, a na-ewepụkwa akwụkwọ ndị na-enweghị mkpa. Maka ngwakọ "Masha f1" a na-atụ aro ka e guzobe osisi 1, a na-eme ya otú a:
A na-ewepu mkpịsị akwụkwọ na ovaries kpamkpam na mkpịsị akwụkwọ anọ dị n'okpuru.
Na ihe na-esonụ (anọ) ọ dị mkpa ịhapụ otu akwukwo na ovary.
Ekem ke 10-12 sinuses 2 epupụta 2 ovaries fọdụrụ.
Na akpatre, na 12-16 sinuses, 3 epupụta 3 ovaries fọdụrụ, ndị fọdụrụ na-ewepụ, na isi (okpueze) na-pinned.
Spud cucumber bushes mkpa ọ bụla karịa 2 ugboro kwa oge.
Ọ dị mkpa iji na-eri nri na nri n'oge dum oge oge na ngwakọta nke liter nke nri na 10 lita mmiri.
Mụtakwuo maka kukumba fatịlaịza.
Oge mbụ a na-emepụta osisi ahụ mgbe akpa 2 mbụ pụtara na ha, oge nke abụọ na nke ọzọ - kwa ụbọchị 14. Ma ọ bụrụ na a gwakọta ntụ na ngwakọta ahụ a chọrọ, mkpụrụ osisi ahụ ga-ekele onye bi n'oge okpomọkụ na-eto eto ngwa ngwa.
Ọ dịkwa mkpa ka ị ghara ichefu banyere garter nke osisi ndị ahụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ha na ị ga na-eto na-emechi n'ala. Maka nkwado na-ejikarị trellis, nke nwere tupu ọdịda, tinye ha na ntụziaka nke ahịrị.
Ụbọchị ise mgbe a kụrụ ihe, ọ dị mkpa ka ejikọta ejima n'elu ohia ọ bụla, nke a na-ekwesịghị ịgbatị agbatị ka ọ ghara imebi ya. Ya mere, na-eto eto Ome na-eduzi ngwa ngwa na nke a vertical trellis.
Ebube na mkpokọta a kwesịrị inwe ụfọdụ ebe nchekwa ka ọ ghara imebi ya, si otú a kpachie ihe oriri ya. Ọ bụghị n'ihi na ihe ọ bụla na pụtara n'oge mfri eke ma tọrọ ụtọ kukumba iche iche Masha f1 meriri ịhụnanya nke niile gardeners nke Russia. Achọghị nlebara anya ya, nlekọta ọrịa na nụ ụtọ ọhụụ nwere ike ịdakwasị ndị isi ndị cucumber.